Maalinta Caalamiga ee Shaaha. | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in Wararka May 22, 2021	0 202 Views
MUQDISHO (HN) — Dunidu waxay maanta oo ah 21 May u dabaal-degaysaa Maalinta Caalamiga ah ee Shaaha.
Halka badi waddamo badan sida Hindiya ay la-daala-dhacayaan xakameynta wejiga labaad ee xanuunka soo laba-kacleeyey ee Covid-19, Cabidda Shaaha wuxuu safka hore wali kaga jiraa diirsanayaasha jirka qofka siiya firfircooni iyo joogsanaan xilliyada adag ee ku abuura buuq iyo daal badan.
Qarniyo badan, shaahu wuxuu ahaa aalad dawo aan loo adeegsado mararka qaar. QM ayaa si kastaba, sanandkii 2020 ku dhawaaqday xuska Maalinta Caalamiga ee Shaaha si loogu baraarugo faa’iidooyinka caafimaad ee ku jira cabidda shaaha.
Maalintani waxaa muggeedii ugu horreysay lagu dhawaaqay sannadkii 2019-ka si loogu dabaal-dego geeddi-socodka taariikh iyo dhaqan ahaaneed ee ku gadaaman shaaha. Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa ujeedadeedu tahay in helitaanka shaaha uu noqdo mid qof kasta oo dunida jooga uu ku raaxaysan karo – iyada oo taas loo marayo joogteynta wax-beerashada. Waxay sidoo kale xaqiijinaysaa nolol tayo leh oo ay ku noolaadaan beeraleyda shaaha, shaqaalaha iyo ganacsatada ku howlan.
Goor hore oo maalintan oo kale ah sannadkii 2005 ayaa si aan rasmi ahayn loogu dabaal-degay laakiin taniyo sannadkii 2015-ka, hinsideeha ayaa hor yiiilay QM si ay u meelmariso dhaqan ahaan in si caalami ah loogu dabaal-dego.
Sannadkii 2019-ka ayaa si kastaba, lagu dhawaaqay in Maalinta Caalamiga ah ee Shaaha ay kamid tahay Maalmaha Caalamiga ah.
Gu’yaalo is cirbinaya ayuu wax-soo-saarka Caleenta shaaha ahi waxay maraysay heerar kala jaad ah. Waxaa jira nuucyo ay midab ahaan u kala baxaan sida Shaaha Cas, Shaaha Cagaaran, Shaaha Jaalle, Shaaha Madow iyo Shaaha Cad iyo kuwa kale.
Mararka lala barbardhigo Kafeega ama Qaxwaha, maadada kafeynta ah ee ku jirta shaaha aad bay ugu yar tahay. Sidaas darteed, qofka kuma qaadayso inuu qabtimo ama uu la’aanteed joogi waayo. Waana mid jirkiisa siinaysa geyfanaan iyo firfircooni. Daraasado qaar oo lagu sameeyey Shaaha ayaa lagu ogaaday inuu yareeyo heerka wadne-qabadka ama xanuunada wadnaha ku dhaca. Wuxuu sidoo kale ilaaliya lafaha kana caawiyaa qofka inuu culeys ahaan is dhimo.
Hindiya oo ah dalka labaad ee ugu soo saarka badan Shaaha dunida oo dhan, marka laga yimaado Shiinaha oo kaalinta koowaad ku jira, waxaa sannadkan uu la halgamayaa la-tacaalidda xanuunka faafaya ee Corona Virus oo dad badan ay uga dhinteen.
Sannadkii hore, dowladda New Delhi waxay dunida u iib geysay qiyas dhan 208 mkg oo shaaha.
Dalalka Sri-lanka iyo Kenya ayaa soo galaya kaalmaha xiga ee soo saaridda Shaaha kaddib Hindiya.
Somaaliya in kasta oo aysan ku jirin dalalka soo saara caleenta shaaha, haddana waxay safka hore kaga jirtaa umadaha aadka u caba. Waxaana dhaqan ahaan uu kamid yahay mid lagu baadisooco bulsho ahaan. Miyiga iyo magaalaba, Shaaha wuxuu Somaalida agteeda kaga jiraa kaalin muhiim ah. Waxaa celcelis laba jeer ka badan laga yaabaa in qofku uu 24-kii saacba qac ka siiyo shaaha.
Sida dhow oo ay Somaalidu u qabatimeen cabidda Shaaha waxaa laga fahmi karaa murtida iyo maahmaahyada ay isu-tebiyaan sida rag waa shaah dumana sheeko.
Waxaana xusid mudan in ilo dhaqaale uu shaahu u yahay kumaankun qoysas ah oo reeraha ka biisha iibkiisa iyo fursado shaqo oo uu u abuuray da’yarta haweenka u badan ee xoojiya maqaayadaha badi dhaca kusoo jeedka laamiyada kuwaas oo qaar badan oo kamid ah ay kaga maarmaan inay ina rageed oo kaliya ka sugaan dhacsiga nolol maalmeedkooda.
Previous: Somaaliya iyo Saxaafadeeda tebisa Dunida Colaadaha iyo Rejo-xumida.
Next: Maalinta Caalamiga ah ee Xanuunka Isku-furanka.